သင့်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့စွမ်းအားနှင့် ဂျပန်စကားရဲ့ဆက်စပ်မှု - JAPO Japanese News
သင့်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့စွမ်းအားနှင့် ဂျပန်စကားရဲ့ဆက်စပ်မှု
သော 20 Aug 2021, 14:09 ညနေ
အခု ကမ္ဘာမှာ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ anime ဖြစ်တဲ့ “ Jujutsu kaisen”
ကိုရိုနာကြောင့် အပြင်မထွက်ရတာနဲ့ အချိန်ပိုနေတာကြောင့် ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အိနုမခိ တိုးဂဲ့ ဆိုတဲ့ မင်းသားတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုရဲ့ စီနီယာ ကာရိုက်တာပေါ့။
အမြဲတမ်းပါးစပ်ကိုကာထားပြီးတော့ သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလည်း onigiri လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းနာမည်တွေကြည့်ပဲဖြစ်နေတာက ထူးဆန်းနေတာပါပဲ။
သူက ပါးစပ်ကိုကာထားတာကို ဖယ်လိုက်ပြီး အမိန့်ပေးတဲ့စကားလုံးကို အော်လိုက်ရင် အဲဲ့ဒီမှာ ကျိန်စာစွမ်းအင်ပါလာပြီး၊ တစ်ဖက်လူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။Manga အကြောင်းပြောနေတယ်လို့ထင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်က လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ (kotodama) တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
anime ထဲမှ သုံးလိုက်တာကြောင့် ပိုလူသိများသွားတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းက စကားလုံးတွေမှာ ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတွေ ရှိနေတယ်လို့
ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးအတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ဆိုကြပြီး၊ ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ မကောင်းတဲ့စကားကိုပြောရင် မကောင်းတာတွေကိုယ့်ဆီပြန်လာမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
တစ်ဖက်လူကိုကျိန်ဆဲတဲ့စကားလုံး၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စကားလုံးကိုပြောရင်၊ အဲ့ဒီ kotodama ရဲ့အစွမ်းက သင့်ဆီပြန်လာပြီး၊ မကောင်းတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဂျပန်စကားမှာ တစ်ဖက်သားကို ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းတာတွေ မလုပ်တာက ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါ။
ဒီလိုလုပ်တာက ဂျပန်စာသင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်တော့ စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း၊ ဒီလိုဖြစ်လာတာက kotodama ရဲ့အစွမ်းကိုသတိမူပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လို့ပါ။
စာမေးပွဲဖြေဖို့ စာကြိုးစားနေတဲ့ကျောင်းသားရှေ့မှာ ကျမယ်၊ လွဲမယ်၊ လဲမယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရင်၊ တကယ်ဖြစ်လာတတ်လို့ မသုံးကြဘူးဆိုတာက၊ အခုအထိ ဂျပန်လူမျိုးတွေသိနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပါ။
ဂျပန်စကားမှာ ဒီလိုဥပမာရှိပါတယ်။ ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါ။
ဂျပန်မှာတော့ “ ဆုရုမဲ့ အိက” ဆိုတဲ့ကင်းမွန်အမျိုးအစားကို အခြောက်ခံရောင်းတာကြောင့်၊ ဆုရုမဲ့ လို့အလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစကားလုံးဟာ ဆုရုမဲ့ အနေနဲ့ဆိုရင် မကောင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေပါတယ်။
လောင်းကစားမှာဆိုရင် “ ဆုရုမဲ့” ၊ တစ်နည်းအားဖြင့်မျက်စိဆုံးရှုံးခြင်း (လက် ဒါမှမဟုတ် အန်စာတုံးအရေအတွက်ကိုဆိုလိုသည်) လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြောင့် ကံဆိုးစေတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အတရိမဲ့ ဆိုပြီး။ ခန်းဂျိနဲ့ရေးရင် 当たり目။
အသေးအမွားကစ စိတ်ပူနေတာပဲ…လို့ထင်ရပေမယ့်၊ လောင်းကစားမှာဆိုရင် အရမ်းအရေးကြီးလို့ပါပဲ။
ဂျပန်ရိုးရာစဉ်းစားနည်းဆိုပေမယ့်လည်း၊ ဂျပန်မဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးအယူအဆတွေရှိ‌ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာလည်း မောရှေနှင့်ခရစ်တော်တို့ဟာ Kotodama ကိုသုံးတဲ့နေရာ တော်တော်များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်သူများ သိကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း Power of Words ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိပြီးတော့၊ Kotodama ယဉ်ကျေးမှုလိုမျိုး အယူအဆတူပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ မူလအစက ဘယ်ကပါလဲ?
Kotodama ဆိုတာက ဘာလို့ရှိနေရတာလဲ?
ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး သိပ္ပံပညာအရ ရှင်းပြထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာပဲမဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ယုံကြည်နေကြတာကြောင့်၊ နှစ်တစ်ထောင်ကျော်သမိုင်းရှိနေတဲ့ Kotodama ယဉ်ကျေးမှုမှာ အစွမ်းရှိနေလို့ပဲ ဒီလောက်အကြာကြီး လက်ဆင့်ကမ်းသိလာကြတာလို့ တွေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၈၀% ကအရည်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
စကားလုံးကို ပြောလိုက်ရင် အသံထွက်လာပြီး၊ အသံကလည်း လှိုင်းတွေလိုမျိုး စီးမျောသွားပါတယ်။
မကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာပါတဲ့ မကောင်းတဲ့ တုန်ခါမှုရော၊
ခန္ဓာကိုယ်အစွန်အဖျားအထိ တုန်ခါမှုတွေအဖြစ်နဲ့ စီးမျောနေတာကြောင့် ဒီလိုအစွမ်း တွေရှိနေတာလို့ ပြောတဲ့သူရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျကျ သက်သေတော့မရှိပါဘူး။
တတ်နိုင်သလောက် ကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေကို သုံးကြည့်မယ်
လျှောက်ပြောနေတာ ညာနေတာလို့ ထင်နေသူတွေလည်း၊ တစ်ခါလောက်တော့ စမ်းကြည့်ပါ။
၃လလောက်စမ်းကြည့်ပြီးရင် အဲ့ဒီအစွမ်းကို နားလည်မှာပါ။
တွေးနေရုံမျှနဲ့ နားမလည်နိုင်တာကြောင့်၊ အသံထွက်ပြီး တစ်ဖက်လူကို ချီးကျူးရမယ်။
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ စောင့်ထိန်းချင်တဲ့ စည်းမျဉ်းကိုပြုလုပ်ပြီး နေ့စဉ်စကားပြောကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ၊ စတာတွေကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တာကြောင့်၊ နေ့တိုင်းတစ်ဖက်လူမျက်နှာကို အပြုံးလေးနဲ့ကြည့်ရင်း ပြောကြည့်ကြရအောင်။
မယုံကြည်နေသေးတဲ့ သင့်အတွက်လည်း ဒီလိုပြောလိုက်ရုံလေးနဲ့ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သွားရင် ကံကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးမိမယ်မဟုတ်လား?
တခြားသူတွေအပေါ်လည်း ကောင်းရာရောက်တာကြောင့်၊ သေချာပေါက် စမ်းကြည့်ပါနော်။
I love You ဆိုတာက “အအိရှိတဲ့ရု (aishiteru)” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လား ?
ယာခူဇာတွေကို လက်ခံထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း
‌ရောဂါကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးများ !!!!!!
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အရင်းခံယုံကြည်ကြတဲ့ “ ရှင်းတိုး” ဆိုတာ …
ငွေအများကြီးရတဲ့ တူနာငါးဖမ်းသင်္ဘော! “ ငွေချေးပြီးရင် တူနာငါးဖမ်းသင်္ဘောမှာလုပ်ဆိုတဲ့” အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်။
အဲဒိုခေတ်ရဲ့ မိတ်ကပ်က သေစေနိုင်လောက်တယ် ?
ကူညီပေးချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲ မိအေး ၂ ခါနာရတဲ့ Don Quijote ဆိုင် !!!!!
ချစ်သူရဲ့ ယောက်ျားတန်ဆာကိုကိုင်ပြီးလျှောက်သွားနေခဲ့သူ မိန်းကလေး..(ဖြစ်ရပ်မှန်)
Twitter ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ 『ヤンキーおにぎり』 Yankī onigiri
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို ဂျပန်တွေက ဘာကြောင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာလဲ ?